बिदाको दिनमा पनि बजारमा ठगी भएमा प्रहरीलाई खबर गर्नुस् ! - NayaNepal News
Home समाचार बिदाको दिनमा पनि बजारमा ठगी भएमा प्रहरीलाई खबर गर्नुस् !
बिदाको दिनमा पनि बजारमा ठगी भएमा प्रहरीलाई खबर गर्नुस् !
मन्त्रालयले यातायात व्यवसायी, थोक तथा खुद्रा विक्रेतालाई आम उपभोक्ताको सेवा पु¥याउन अनुरोध गरेको छ । अनुचित फाइदा लिने मनसायले ठगी गर्ने, कानून मिच्ने, गुणस्तरहीन सामान बिक्री गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी गर्नेलाई कानूनअनुसार कारवाही गर्ने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ ।
दिपावली र छठका अवसरमा प्रयोग हुने पटाका, आतिसबाजीजस्ता विष्फोटक पदार्थका कारण सर्वसाधारणको स्वास्थ्य तथा सुरक्षामा प्रतिकूल असर पुग्ने र चोटपटक तथा आगलागीसमेत हुने भएकाले यस्ता विष्फोटक पदार्थको प्रयोग नगर्न आग्रह गर्दै बेचबिखन र प्रयोग गरेको पाइएमा कारवाही गर्ने मन्त्रालयद्वारा बुधबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।-रासस
Previous articleमहरा प्रकरण : रोशनीका श्रीमान-श्रीमतीको सम्बन्ध विच्छेद
Next articleसुनको मूल्य फेरी बढ्यो
देशमा आज ११औ‌ं गणतन्त्र दिवस मनाइदैं
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनाउन पहल